Kung Fu tarihin’i maitre Avoko : “Tsy ekena intsony ny hisian’ny korontana…” -
AccueilRaharaham-pirenenaKung Fu tarihin’i maitre Avoko : “Tsy ekena intsony ny hisian’ny korontana…”
Tsy ekena intsony ny hisian’ny korontana, ary mampitandrina ireo izay alaim-panahy hanao izany izahay, hoy ny hafatra avy amin’ny Kung Fu Wisa tarihin’ny grand Maitre Avoko Rakotoarijaonina, nandritra ny fanohizana ny fankalazana ny faha-38 taonan’ny Kung Fu natao tao Antsirabe ny sabotsy teo. “Miantso fitoniana sy firaisankina izahay mba hisian’ny fampandrosoana”, hoy hatrany ny hafatra.
Tao amin’ny renivohitr’i Vakinankaratra indray no nanohizana ny fankalazana ny faha-38 taonan’ny Kung Fu taorian’ny tany Tsiroanomandidy. Miisa 60 000 (enina alina) ireo mpikatroka ao Vakinankaratra, raha toa ka mahatratra 500 000 ( dimy hetsy) ny mpikambana rehetra manerana ny Nosy. Nomarihina tamin’ny hazakazaka sy fampisehoana haiady moa ny hetsika tao Antsirabe. Nampiavaka ny hetsika kosa ny fijoroana vavolombelona nataon’ireo zoky be izay nogadraina sy niaritra ny tifitra basy ary famonoana nataon’ny tafika ny taona 1985.
Mbola hitohy aty Antananarivo kosa ny fankalazana amin’ny alahady faha-15 avrily izao.
Ny mpanao kung Fu an’i Vakinankaratra moa dia nangataka ihany koa ny firotsahan-kofidiana an’ingahy Hery Rajaonarimampianina fanindroany hitantana an’i Madagasikara amin’ity taona 2018 ity, ary nanome toky fa hanome ny heriny manontolo ho fanohanana azy amin’izany.
Nitarika ity hetsika ity moa ny grand Maitre Avoko sy ny federation Malagasy. Ny hetsika rehetra kosa dia teo ambany fiahian’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Ny minisiteran’ny Tanora sy ny Fialomboly tarihin’i minisitra Anicet Andriamosarisoa kosa no niara-nisalahy tamin’izany.
Taorian’ny fahatapahan’ny karaman’ireo mpiasam-panjakana maro dia efa nisy ny baiko amin’ny fandraisana andraikitra faran’izay haingana nomen’ ny Filoham-pirenena, ary taorian’izany no nanaovan’ny minisiteran’ ny Asa sy ny asa sosialy, ary ny minisiteran’ ny Vola sy ...Tohiny